Neymar Oo Seegi Kara Kulanka PSG Ee Kooxda Real Madrid Ee Champions League-ga
HomeWararka CiyaarahaNeymar oo seegi kara Kulanka PSG ee Kooxda Real Madrid ee Champions league-ga
December 24, 2021 Wararka Ciyaaraha, Champions League, Horyaalka France 0
Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa inay walaac ka muujisaysoo kabashada Neymar ee dhaawac canqowga ah, iyadoo ka cabsi qabta in ciyaaryahanka reer Brazil uu seego kulanka Champions League ee wareega 16ka ee Real Madrid .
29-sano jirkaan ayaa dhaawac canqowga ah ku maqnaa tan iyo 28-kii bishii November, waxaana waqtiga uu Neymar garoomada kusoo laabanayo ay muujineyso inuusan diyaar u aheyn Mauricio Pochettino ugu yaraan kulanka lugta hore ee Los Blancos, kaasoo la ciyaari doono. 15 Febraayo.
Tan iyo markii uu ku soo biiray kooxda reer France 2017, Neymar waxa uu la dhibtoonayay dhaawacyo, isagoo ugu yaraan la kulmay dib u dhac taasoo keentay inuu seego dhawr kulan xilli ciyaareed kasta.
Neymar ayaa wali doonaya in uu soo dadajiyo xaaladiisa soo kabasho ee xanuunka canqawga haatan ka soo gaaray si uu qayb uga ciyaaro lugtii hore isaga oo hore u seegay kulamadii bug-baxa ee tartankaas ee Real Madrid iyo Manchester United.
Xiddiga garabka ka ciyaara ayaa ku guuleystay seddex gool iyo seddex caawin 10 kulan oo Ligue 1 ah xilli ciyaareedkan, lakiin weli ma uusan helin wax gool ah Champions League ololahan.